Fanondranana olona any ivelany :: Tovolahy sy tovovavy maromaro nangonina tao amina trano iray • AoRaha
Fanondranana olona any ivelany Tovolahy sy tovovavy maromaro nangonina tao amina trano iray
Nahitana tovolahy sy tovovavy maro­­maro, avy any amin’ ny faritra, ny trano lehibe iray etsy Andohantapenaka izay nanaovan’ny mpitandro filaminana fitsirihana, tamin’ny alarobia lasa teo. Miisa roapolo ny lehilahy. Valo ireo vehivavy. Hita tao ihany koa ny olona nampiantrano azy ireo.
Fantatra fa kasaina haondrana an-tsokosoko any Dubaï ireto andiana tanora ireto. Vehi­vavy iray, 38 taona, no tompon’ antoka amin’izany ka nosamborina hatao famotorana.
Nahagaga ny mpiara-monina ny fisian’ireo olona maromaro avy any amin’ny faritra izay mitoby ao amina trano iray ireo, nandritra ny andro maromaro. Nampandrenesina ny polisy hijery akaiky ny momba izany. Voa­laza fa efa tamin’ny volana oktobra no nahatongavan’ ireo zatovo ireo, teny an-toe­rana. Nampiomanina izy ireo fa efa tsy hoela no hihazo an’ i Dubaï, kanjo izao tra-tehaka izao.
“Nahitana antontan-tara­tasy marobe toy ny kopia, kara-panondro, pasipaoro momba an’ireo olona haondrana tao amin’ilay trano. Milaza ireo olona voafitaka fa vola iray tapi­trisa ariary no nalaina tamin’ izy ireo tsirairay. Nambaran’ilay vehivavy voarohirohy ho mpanondrana fa efa maro ny olona nalefany an-tsokosoko any ivelany”, araka ny fanam­pim-panazavana tamin’ny tatitra avy amin’ny polisy.
Tamin’ny fanadihadiana ihany koa no nahalalana fa misy Malagasy miara-miasa amin’ity vehivavy ity any amin’io firenena fandefasana olona io. Izy indray no mampanantena an’ireo olona halefa, ny momba ny fano­mezana asa, toy ny mpibata entana ho an’ny lehilahy, miasa amina orinasa kosa ho an’ny vehivavy.
Famatsiana rano eto Antananarivo :: Nanamboatra fotodrafitrasa maro ny orinasa Jirama
Baolina kitra – «CAN 2021» :: Nanamafy ny fanovana ao amin’ ny Barea i Nicolas Dupuis